“Oromiyaatti bilbilliifi interneetiin citee ture Koronaavaayirasiin walqabsiisee wanti jijjiirame hin jiru,” Itiyoo-Telekoom – Ayyaantuu Online
HomeAfaan Oromoo“Oromiyaatti bilbilliifi interneetiin citee ture Koronaavaayirasiin walqabsiisee wanti jijjiirame hin jiru,” Itiyoo-Telekoom
(BBC Afaan Oromoo) — Weerara Koronaavaayiras waliin walqabsiisee naannoo Oromiyaa bilbilliifi interneetiin irraa cite jiru ilaalchisuun wanti jijjiirame akka hin jirre Itiyoo-Telekoom beeksise.
Godinaalee Oromiyaa gama lixaafi kibbaatti tajaajilli bilbilaafi interneetii erga addaan citee ji’a sadaffaa keessa jiraatus weerara Koronaavaayirasii waliin walqabatee akka deebiyuuf gaaffiin bal’inaan dhiyaachaa jiraatullee hanga ammaatti wanti adda ta’e akka hin jirre hoji-raawwachiiftuun Itiyoo-Telekoom BBCtti himan.
Weerarri Koronaavaayirasii haalaan yaaddessaa ta’uun isaa erga beekameefi Itoophiyaa keessattis namoonni qabaman jiraachuun erga bira ga’amee booda namoonni hedduun tajaajilli komunikeeshinii Oromiyaa keessatti addaan citee jiru kun bakka isaatti deebi’uun lammileen dhibee hamaa akka ibidda saafaa tatamsa’aa jiru kana ofirraa ittisuuf odeeffannoo malu argachuu qabu waan ta’eef banamuu qaba jechuun gaaffachaa jiru.
‘Mootummaan Itoophiyaa interneetiifi bilbila Oromiyaarratti cufe atattamaan banuu qaba’
Keessumaa gama lixa Oromiyaa tajaajilli bilbilaafi interneetii addaan cituun isaa odeeffannoon waa’ee koronaavaayirasii lammilee qaqqabaa waan hin jirreef rakkoo lammilee daran hammeessa gaaffileen jedhan hedduudha.
Itoophiyaa keessatti namoonni koronaavaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa’ee kanneen biroo hedduun ammoo qabamuu malu shakkiin jedhu erga ministeera fayyaatiin ibsamee booda, tajaajila bilbilaafi interneetii Oromiyaarraa addaan cite bakkatti deebisuudhaaf wanti yaadame jiraa gaaffii jedhu BBCn hoji-raawwachiiftuun Itiyoo-telekoom Firehiwoot Taammiruutiif dhiyeessee ture.
Kaleessa galgala sababa hojiitiif magaalaa irraa fagaatanii turanii deebi’aa akka jiran kan himan hoji-raawwachiiftuun kun waa’ee tajaajila telekoomii addaan cite turee waliin walqabsiisee odeeffannoon haaraa ta’e akka hin qabne BBCtti dubbataniiru.
Itti-dabaluudhaan, “akkuma beekamu duraanis tajaajilli kan cufameef sababii rakkoo nageenyaaf ture. Kanaaf, wanta addaa nuti tarkaanfii fudhanne hin jiru. Wanti adda ta’e yoo kan jiraatu ta’e isin beeksifna.”
Interneetiin addaan akka citu kan taasifame rakkoo nageenyaan kan walqabate waan ta’eef qaamota dhimmi isaa isaan ilaallatu waliin mariyachuudhaan kan murtaa’u yoo jiraateef akka beeksisan ibsaniiru.
Interneetiin addaan cituu isaa, “sirriitti maaliif akka ta’e nutis warri kaanis qaamonni mootummaa dhimmi isaa isaan ilaallatu ibsa irratti kennaniiru. Kanaaf, kana waliin walqabsiisee odeeffannoo adda ta’e hin qabu. Anis sababa hojiitiif gara baadiyyaatti bahee reefuun xiyyaara irraa bu’e. Wanta adda ta’e hin qabu. Wanti adda ta’e yoo jiraate garuu isin beeksifna,” jechuun BBCtti dubbatan.
Yeroo weerarri koronaavaayirasii guutummaa addunyaa irratti tatamsa’aa jiru kanatti karaa bilbilaafi inteneetii odeeffannoon ummataaf darbu akka ummatichi of eeggatu waan dandeessisuuf tajaajilli kun akka banamuuf namoonni miidiyaalee hawaasummaa fayyadaman waamicha taasisaa jiru.
Torban darbe keessa dhaabbanni mirgoota namoomaaf quuqamu Huumaan Raayitis Waach ibsa baaseen tajaajilli bilbilaafi intrneetii ji’a lamaa oliif Lixa Oromiyaarraa cite ture mootummaan Itoophiyaa akka banuuf gaafatee ture.
Dhaabbatichi ibsa baase irratti akka jedhetti, tajaajilawwan bilbilaafi interneetiin addaan cituun isaa maatiifi firoonni akka quba wal hin qabaanne gochuu qofaa osoo hin taane tajaajilawwan jireenyaaf barbaachisoo ta’an akka fayyaafi sochii hawaas-dinagdee guutummaatti danquun isaa ibseera.
Akkasumas, yeroo mootummaan duula hidhattoota irratti gaggeessutti maaltu akka ta’e beekuudhaaf odeeffannoon akka hin jiraanne taasissera jedhe Huumaan Raayitis Waach.
Huumaan Raayits Waachitti Daarektarri Gaanfa Afrikaa La’etiitiyaa Baader, “Tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa tajaajila komunikeeshinii adda kutuutiin Oromiyaa keessati raawwataa jiru hawaasnicha haarsaa hin barbaachifne kanfachiisaa waan jiruuf attattamaan kaasuu qaba,” jedhan.
Rakkoon tajaajilawwan bilbilaafi interneetii addaan kutuun kunis tajaajilawwan murteessoo, wantota ciccimoo biyyaafi addunyaa irratti deemaa jiran akka hubannoo malu hin arganne taasisa jedhu daarektarichi.
Bulchiinsa Ministira Muummee Abiy Ahimad jalatti, osoo mootummaadhaan sababni gahaafi amansiisaan hin dhiyaatiin yeroo tasgabbiin hawaasaafi siyaasaa dhibbutti komunikeeshinii adda kutuun gocha baratamaa ta’eera jedha Huumaan Raayits Waach.
Ibsa Huuman Raayits Waach kun itti dabaluudhaan, sababa komunikeeshiniin addaan citeef dhaabbileen tola-ooltummaa afur rakkoon akka isaan mudate ibsuudhaan, haalli jiru tajaajila fayyaa naannootti argamurratti dhiibbaa qaqqabsiisuu isaa hojjetoota fayyaa eeruun gabaasichi ibseera.
A L I Mudde irraa kaasee tajaajilli bilbila mobaayilaa, bilbilli inni kaaniifi interneetiin godinaalee lixa Oromiyaatti argaman akka Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaafi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti addaan cite akka jiru jiraattonni godinaalee kanaa ni dubbatu.
Dhugaa Abbaan Himatu Caalaa Ragaan Hin Jiru! Damee Boruu: Waxabajjii 18, 2019 Obbo Leencoo Lataa…